Anyị na-enweta ezigbo okporo ụzọ okporo ụzọ si Pinterest. Ọ na-agbanwe agbanwe ma ọ bụrụhaala na ọkwa anyị na Pinterest na-agbanwe agbanwe. O nyekwara aka mgbe anyị wụnye Pinterest Pin It Button For Images - ị ga-ahụ ya ma ọ bụrụ na ị kpuchie onyonyo dị n'okpuru. Ọtụtụ mmadụ ole na ole na-ekekọrịta akwụkwọ akụkọ anyị. Marketinglọ ahịa Infographics anyị na-enwe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị na-eso 1,000 ma anyị ejiri obi eziokwu na-eme obere mpụga nke izipu ihe ọmụma anyị n'ebe ahụ! Na